भारतमा एक नेपालीको बिभत्स हत्या, परिवारद्धारा न्यायको माग – Korea Pati
भारतमा एक नेपालीको बिभत्स हत्या, परिवारद्धारा न्यायको माग
March 30, 2019 LeaveaComment on भारतमा एक नेपालीको बिभत्स हत्या, परिवारद्धारा न्यायको माग
बैतडी । भारतको पञ्जावमा बैतडी मेलौलीका एकजनाको बिभत्स तरिकाले हत्या भएको छ । बिगत ३० बर्षदेखि पञ्जाबमा बस्दै आएका मेलौली २ कर्पतका ४३ बर्षीय श्यामसिंह ओडको चैत्र ६ गते हत्या भएको खुलेको छ । उनको शव गोबिन्दगढ भन्ने ठाँउमा फालिएको अबस्थामा भेटिएको मृतकका भतिजा राजेन्द्र वडले बताए ।
मृतक श्यामसिंह श्रीमती र छोराछोरीका साथ भारतमा बस्दै आएका थिए । तर उनकी श्रीमती लक्ष्मी कुमारी (हरु)ले ६ महिला अघि भारत पन्जाब स्थित जलन्धर मुग्दमपूर जोतिचोकमा बस्दै आएका चम्बावत निबासी अर्जुन कुमारसंग दोश्रो बिहे गरेकी थिइन् । श्यामसिङ र लक्ष्मीका १ छोरा तथा १ छोरी छन् तर उनीहरु लक्ष्मीसंगै बस्दै आएका छन् ।
अर्काको देशमा भएको यो घटना कस्ले गरायो ? किन गरायो उस्ले कस्को के बिगारेको रहेछ ? हामीले न्याय पाउला की नपाउला ? हाम्रा लागि कोही होला की नहोला ? यी सबै प्रश्न मृतकको परिवारको मनमा उब्जेका छन् भने गाँउले सबै अचम्मीत छन् । दुख ब्यक्त गरिरहेका छन् ।